Iindaba -Ulwazi lokuhlolwa kwetywina
Imoto kunye nemitya yokutywina ifestile
Ukwakhiwa kwetywina yerabha yokwakha
Imigca yetywina lokhuselo lwe-Edge
Ukuvalwa kweminyango yeKhabhinethi
Ukutywina amatywina erabha
Umtya werabha wegwebu
Umtya werabha wokuncamathela
Ulwazi lokuhlolwa kwetywina
Ulwazi ngokuHlolwa kweTywina leRubber
1. Zithini izinto zokuhlola zetywina zerabha?
1) Jonga ukuba imveliso icocekile.
2) Jonga ukuba imveliso ineziphene ze-vulcanization;
3) Jonga ukuba imveliso ineziphene zokucheba / zecala;
4) Jonga ukuba imveliso inesiphene na;
5) Jonga ukuba iimveliso zineziphene zokusika;
6) Jonga ukuba imveliso ikhenkcisiwe, ikhubazekile kunye nezinye iziphene.
2. Zithini iimpawu zesiphene seemveliso zetywina?
1) Ukungcola: ezo zingadibanisiyo nekhompawundi zibonisa imibala eyahlukeneyo okanye imicimbi yangaphandle ebonakalayo kwimveliso;
2) Ukuqhekeka: kukho iintanda ezibonakalayo kumphandle wangaphakathi nangaphandle okanye ezinye iindawo zemveliso;
I-3) Ukuzibandakanya: imveliso yemveliso yahlulwe ngamathambo kwaye ayinakudityaniswa kunye;
I-4) Ukunqongophala kwemathiriyeli: imveliso ayinayo i-contour ebonakalayo okanye ezinye iindawo azinayo inaliti yeglue okanye inaliti ye-glue engonelanga okanye umkhondo we-glue ocacileyo
I-5) I-Bubble: umphezulu wemveliso ngokucacileyo uyarhabaxa kwaye ungqukuva;
I-6) Uphawu lokuhamba: kukho imigca ebonakalayo kumphezulu wemveliso, kwaye umphezulu uyakhanya kwaye ulayini;
7) Umdaka emdaka: umphezulu wemveliso ngokucacileyo awugudisi ngokwaneleyo;
8) Uphawu lomngundo: kwinkqubo yokwenza okanye ukusebenzisa ukungunda, umda we-concave okanye i-convex yomhlaba ohambelana nemveliso ubangelwa kukungqubeka kunye nokukrala komngundo wokungunda (iziphene zeemveliso ezinesikhunta esifanayo enjalo);
9) Scald: ukutsha okucacileyo kumphezulu wemveliso;
10) Ukulungisa: amazinyo amaqhosha avela kwinxalenye yokucheba, eya konakalisa ikholaid yemveliso uqobo;
11) Unilateral: iinxalenye ezilinganayo zithambekele, ngaphezulu nangaphantsi kwelinye icala, okanye nangaphandle okanye kwelinye icala. Umzekelo, ububanzi becala likhulu kwaye elinye icala lincinci, kwaye ubukhulu bodonga abalingani;
I-12) Imoto eyaphukileyo: kukho amanqaku okusika acacileyo kwindawo yokusika okanye umda wokusika awuhambelani kwaye ufakwa kwiserred;
13) Iglu yokugcwala: kwinxalenye yemveliso enamathambo angaveziweyo, indawo ebekiweyo iya kugutyungelwa ngeglu;
14) Ukwahluka: ukungcola okwahlukileyo kumbala wemveliso ngenxa yomxube, ukungunda, njl.
15) Ikhoyili: kukho iringi yocingo ngaphezulu kwemveliso;
I-16) Isiphene sokukhenkcisa: imveliso isikiwe okanye iqhekekile ngenxa yokucheba komkhenkce.
3. Zithini iziphene kwimveliso?
1) Isiphene esibulalayo (a): imveliso ayinakusetyenziswa kwaye icinywe;
2) Iziphene ezinkulu (b): ukusebenza kwemveliso kuncitshisiwe kakhulu, imveliso ayinakusetyenziswa, kwaye imveliso ikhutshiwe;
3) Isiphene sokukhanya (c): ukusebenza kwemveliso kuncitshisiwe, kodwa ukusetyenziswa akuchaphazeleki, kwaye imveliso yamkelekile;
4) Isiphene esincinci (d): ayinampembelelo ekusebenzeni kwemveliso. Sisiphene nje esibangelwa kukwenziwa kakubi kwemveliso kwaye sinokusetyenziswa.
4. Zithini iindlela zokugweba iziphene zembonakalo?
1) Kwimeko yesiqhelo, umgangatho wokubonakala wokutywina uya kulandelwa;
2) Imveliso ayivunyelwe ukuba ne-degumming, cracks kunye nezinye iziphene ezinzima;
I-3) Ukungcola, ukuqhekeka, ukugcwala, ukungabikho kwezixhobo, amaqamza kunye namaqamza abolileyo avumelekile kubuso obusebenzayo, kwaye akukho ngaphezulu kwe-2 ukungcola komngundo, amanqaku okuhamba kunye neendawo ezixineneyo ezingaphantsi kwe-2mm 2 ebusweni obungasebenziyo;
4) Akukho ziphene zivumelekileyo kubuso obusebenzayo, umlomo wangaphakathi nangaphandle wesitywina seoyile uya kuba bukhali, kwaye akukho migca yezihlunu ivunyelwe kumphezulu wangaphakathi nangaphandle;
5) Iringi engunxantathu, ukusika umphezulu kufuneka ube tyaba, kungabikho burr.
Ixesha Post: Jan-27-2021
IDILESI: 1-1-601, tian Kuo Shang Cheng, Ye Jin North Road, Xingtai, Hebei, China